१२० दिनदेखि एयरपोर्टमा फसे विदेशी, यसरी बिताउँदैछन् दैनिकी | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
NAGARIKKHABAR TV २०७७ साल श्रावण २२ गते, बिहीबार
२०७७ साल श्रावण २२ गते, बिहीबार
कोरोना संक्रमणले एकै दिन छ जनाको मृत्यु
access_time2 minutes ago
आजका पत्रपत्रिकामा छापिएका रमाइला कार्टुन
प्रहरीले पासमा कडाइ गरेपछि नाकामा ओर्लिएर पैदलै काठमाडौं प्रवेश
केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना, १३ जिल्लामा हाई अलर्ट, बाढी पहिरोको सम्भावना
access_time34 minutes ago
कोरोना कहरकैबीच रोजगार मुलुक फर्कदै युवा
access_time45 minutes ago
के-के छापिए आजका पत्रपत्रिकामा (फ्रन्टपेज हेर्नुहोस)
कोरोना भाइरसकाे संक्रमण समुदायबाट समूह-समूहमा फैलिदै
बङ्लादेशमा डुङ्गा डुब्दा १७ को मृत्यु
फ्रान्सका राष्ट्रपति आकस्मिक रूपमा लेबनान जाने
विद्यालय भवन शिलान्यास
गाँजासहित दुई युवा पक्राउ
पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय कागजमै सीमित
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ : मेरोतर्फबाट सम्झौता हुन्न, जे-जे छाड्ने हो तपाईंहरु छाड्नुहोस्
भारतविरुद्ध चीनले लद्दाख नजिकै तैनाथ गर्‍याे परमाणु मिसाइल
access_time20 hours ago
नेपालको लिपुलेक नजिक चिनियाँ सेना आएपछि भारतलाई झट्का, विकास युद्ध सुरु भएको टिप्पणी
माइतीघर मण्डलाको जुलुसबाट फैलियो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कोरोना !
मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमा सुरु, आंशिक लकडाउनमा निर्णय हुनसक्ने
मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न, यस्ता भए निर्णय
नेकपा वरिष्ठ नेता नेपाल भन्छन्, 'बालुवाटारबाट मलाई विचौलिया बन्ने प्रस्ताव आयो'
access_time13 hours ago
'लकडाउनको उल्लंघन गर्दै उहाँले जुलुस निकाल्दा कति जना थिए ? समस्या पार्टीमा होइन, प्रधानमन्त्रीमा छ' : मातृका यादव
दुई इलामेली साक्षी राखेर ओली-प्रचण्डबीच तीन घन्टा छलफल : के के भयो संवादमा ?
नेकपा विवाद : भैँसेपाटीस्थित निवासमै पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले भेटे उपाध्यक्ष गौतमलाई
भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिपुलेक नजिकै चीनले बढायो सैन्य गतिविधि : भारतको आपत्ति !
विश्वकै पहिलो पुरुष, जसको देब्रे पाखुरामा लिंग छ
१२० दिनदेखि एयरपोर्टमा फसे विदेशी, यसरी बिताउँदैछन् दैनिकी
access_time२०७७ साल असार २८ गते, आईतवार ०६:२६ PM chat_bubble_outline Comments folder_open रोचक​
एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरुको दैनिकी नै बदलिएको छ । यसले सिंगो समाजलाई नै ठप्प बनाएको छ । भाइरसका कारण कतिपय देशहरुमा मानिसको लाशको थुप्रो लागेको छ । भाइरसको संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनका कारण कतिपयको जागिर गएको छ । यात्रामा रहेका कतिपय यात्रुहरु गन्तब्यमा पुग्न नसकेर ठूलो कष्टमा छन् । यिनै मध्ये एक जनाका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
मनिला इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा एक यात्रु विगत १ सय २० दिनदेखि थुनिएका छन् । आफ्नो देश फर्कने सबै उडानहरु बन्द भएपछि उनी त्यही थुनिएका हुन् । उनले आफू घर फर्किन मानिसहरुसँग मद्दत पनि मागेका छन् । ती यात्रुले आफू २० मार्चदेखि मनिला एयरपोर्टमा फँसेको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् ।
रोमन ट्रपिव नामका यी यात्रु मार्च २० मा बैंकक पुगेका थिए तर उनलाई आफ्नो देशमा प्रवेश निषेध गरियो किनकी फिलिपिन्सले सोही दिनबाट भिसा इन्ट्रीमा रोक लगायो । यसकारण दुर्भाग्यवश उनी त्यहि रोकिन बाध्य भए । न त उनलाई फिलिपिन्सभित्रै जान दिइएको छ न त उनको घर युरोपको इस्टोनिया नै फर्किन दिइएको छ । इस्टोनिया जाने सम्पूर्ण फ्लाइट्स् पनि रद्द भएका छन् ।
उनले एयरपोर्टमा बिताएका दैनिकीका बारेमा पनि पोस्ट गरेका छन् । उनी एयरपोर्टमा कसरी सुतेका छन् र खानाका लागि त्याहाँका कर्मचारीहरुको भर पर्नु परेको भन्ने पनि खुलाएका छन् । ती व्यक्तिले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्दे एयरपोर्टमा सन् १९८८ देखि २००६ सम्म फँसेका इरानी शरणार्थी मेहरान करिमीको बारेमा चर्चा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् । ती शरणार्थीमाथि एक फिल्म पनि बनेको थियो ।
इन्स्टाग्राममा प्रख्यात बनेका ताइवानी वृद्ध जोडी
कोरोना सुरक्षा : सामान बेच्नका लागि पसलेको अचम्मको आविस्कार (भिडियो)
स्मार्ट मास्क जसले आठ भाषा अनुवाद गर्छ
सेती अस्पतालले किन्न सकेन सिटी स्क्यान मेसिन
सुन प्रतितोला १ लाख ३० हजारसम्म पुग्नसक्छ, यसकारण बढ्यो मूल्य (भिडियो)
'जबजलाई देखाएर निरंकुश स्टालिनपथमा प्रधानमन्त्री ओली'
'२५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन दिएका छैनौँ, मेरै पार्टीमा ४५० जनाको बैठक चाहियो' : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री भन्छन्, 'आफ्नै पार्टीले सहयोग गरेन, संकटमा गैर जिम्मेवार किन?' (भिडियो)